Manan-danja ny FFKM – MyDago.com aime Madagascar
Manan-danja ny FFKM
Nahazo vahana tao am-pon’ny vahoaka Malagasy ny FFKM tao anatin’ny andro vitsivitsy. Firy amintsika Malagasy anefa no mahalala ny FFKM ? Ny valiny dia tsotra, maro no efa mahafantatra nefa tsy vitsy ihany koa ireo tokony hampahalalana azy.
Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara izay no fanalavana ny FFKM ; ary izay fiombonana izay no tena heviny, tsy fiombonana amin’ny fivavahana ihany fa eo amin’ny asa fampandrosoana ny firenena koa ; ny mampiavaka ny FFKM dia ny fiangonana tranainy efatra no mikambana ao, ilaina ny mampahafantatra ireo fiangonana efatra ireo.
Ny Eglizy Katolika Apostolika Romana (EKAR) io no fiangonana tranainy indrindra eran-tany ary any Vatican ny foibeny, manana mpino kristianina maro an’isa indrindra eran-tany ary maro an’isa toy izany koa izy ireo eto Madagasikara.
Ny Eglizia Episkopa Malagasy (CEM) Fiangonana Anglikana no nahafantaran’ny maro azy ary any Angletera ny foibeny ary io no finoana arahin’ny mpanjaka any an-toerana , laharana fahaefatra ny finoana Anglikana eto Madagasikara.
Ny Fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM)eo amin’ny lafiny ara-pinoana dia antsoina hoe fiangonana protestanta Kalvinista ny FJKM ; fiangonana vahiny telo no niaviany dia ny LMS (London Misonary Society) ny FFMA (Friends Foreing Missonary Association) sy ny MPF (Mission Protestant Francaise) tamin’ny taona 1968 no niorina ny FJKM manana mpino kristianina maro ary laharana faharoa izy amin’ny isa manaraka ny Ekar,a ny Génève no foibeny any koa no mifandray tsy tapaka amin’ny FJKM.
Ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) Fiangonana protestanta toy ny FJKM ihany ny FLM saingy prostetanta loterana . Marihina fa eo amin’ny protestanta dia misy androny ny kalvinista sy loterana, satria Calmus Luther dia samy mpitondra fivavahana protestanta saingy samy manana ny fomba fijeriny ny finoany . Ny FLM dia ny NMS (Norvezian Missionary Society) no razambeny, teto amintsika ary manana ny foibeny any Norvege sy any Etazonia, laharana fahatelo ny FLM eo amin’ny isan’ny mpino eto Madagasikara , ary any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy miainga eo Antsirabe ka hatrany amin’ny farany atsimo no ahitana FLM betsaka .
Ny azo amehezana ireo fiangonana efatra lehibe mandrafitra ny FFKM ireo dia manana fototra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy efa-tonta ; ka tsy azo hamaivanina ; ny fitambaran’izy efatra ireo dia mahery lavitra noho ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hafa.
Eto Madagasikara dia miparitaka hatrany amin’ny tanàna faran’izay madinika indrindra ireo fiangonana efatra ao anatin’ ny FFKM ireo ; noho izany dia tsy sarotra ny fampitan-kafatra ho an’ny vahoaka .
Mandray andraikitra ny FFKM ankehitriny amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena , azo antoka ny fahombiazan’izany satria ankoatran’ny lanjany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny maha akaiky indrindra ny vahoaka azy dia ampiasan’Andriamanitra ireo mpitarika noho izy manana fikasana tsara eto amin’ny firenena.
Samia mitondra am-bavaka !
3 réflexions sur « Manan-danja ny FFKM »
Ny mampalahelo anefa dia; na dia efa nazavaina injato t@ ireo mpino kristianina teto antanàna aza ny momban’izy ireo dia mbola misy mahasahy manivativa sy manaratsy ary manenjika mihintsy aza. Mampalahelo fa rakaraka ny hirososna lalina @ finoana sy ny fandraisana andraikitra dia mirongatra sy mitombo izay tsy izy hiany koa ny asandemony sy ny fanaovana bizna ny fivavahana eto amintsika. Mampalahelo sy mahamenatra e! « Ringana ny oloko nohon’ny tsy fisian’ny fahalalàna,,, » hoy ny tenin’Andriamanitra, ary tena marina mihintsy izany, manentana antsika kristianina rehetra na avy @ fiangonana inona io na avy @ fiangonana inona mba tsy hiraviravy tanana @ fandraisana andraikitra hoan’ny firenena sy hitondra amimbavaka ny vahoaka Malagasy fa mandrovi-tsihy tanteraka izao ry satana mianakavy!!!
Ny fahitàn’ny olona ny zavatra tsy mety ataon’ireo olona ireo (mpitondra Fivavahana), no mahatonga ny olona (vitsy na betsaka) tsy hanàja sy hanome ny toerana sahaza an’izany hoe Fivavahana izany, ary hanao asan-demony !
Amin’na miliara ny volan’ilay Daoud fony i lery maty ! Mba nentiny taiza avy eo, kanefa ny mpiangona noterena handoa vola be, sy tsy hanao firavaka ?
Aleo asiana fanitsiana kely sao dia mandeha any @ tsy tokony alehany ny resaka. Ny FFKM dia MPANELANELANA. Tsy manolotra hevitra izy ary tsy mampivavaka, ary tsy mitaona ny olona ho krisitana izany @ ity fihaonanana an-tampony ity. Tsy asiana resaka andriamanitra koa ity fihaonana ity. Fa ny mandray ny hevitr’ireo mpizaika no ataony, ary mandridra ny fizotran’izany.
Ka dia aoka tsy hiverina ny resaka hoe devoly sy satana sns… Tsy izany io asa ataon’i FFKM io fa manelanela, manamora ny fifanatonana ary mandray penina sy taratasy ry zareo dia mandray an-tsoratra ny voalazan’ny andaniny sy ny ankilany. Diso be tsy misy ohatr’izany, izay milaza fa tokony ny baiboly no hajaina sy arahina eto tsia dia tsia. Jereo ny tany Egypte. Tsy ilain’ny olona izany fivavahana izany mitondra ny tany sy ny fanjakana, Tsy tany Egypte irery ihany fa na hatr’aiza na hatr’aiza.
Ny eto amintsika dia zoky raiamandreny am-panahy ny FFKM ka izany dia misy hajany. Dia izany indrindra no antony tokony hanaovany ny fikarakaràna io fihaonana an-tampony io. Averiko ihany fa tsy tori-teny no ataony ao fa FAMPIHAOANANA ireo filoha telo sy ilay mpanogam-mpanjakana. Izany indrindra no tokony anjaran’ireo mpitondra fivavahana.satria izao no lalan’ny rariny.
Tsy hitaona ny olona hiditra ao aminy sy hanaraka azy fa manampy ny olona hiara-belona, sy hifanaja ary hampadroso ny tany. Raha izao no lalan’ny FFKM dia maro no ho resy lahatra @ fivavahana kristiana, torak’izany koa ny HMF izay efa manao ny tandrifiny.
Fa raha fampidirana hoe lalàna ao @ baiboly atao lalàn’ny repoblika kosa, na hoe atao programam-pirenena mihitsy ny fivavahana dia diso lalana tanteraka isika.
Dia ho latsa-danja @ ireo firenen-kfa mahatakatra izany ve isika Malagasy ? Ka hanafangaro foana ny atao hoe « toe-saina sy fanahy », MORAL, sy ny fivavahana, RELIGION ?
Ny FFKM sy ny HMF irery ihany no hitako hoe eo @ toerany rehefa miresaka fivavahana, ny ambiny kosa dia tokony handinika fa mikorotana loatra ny tany, ny miaramila manao politika, ny fivavahana miditra any @ politika, ny politikamiditra any @ fitsàrana sns dia tena korotana be tsy hisy farany…
Précédent Article précédent : Fanambarana FFKM : MBOLA HITOHY NY FIHAONAN’NY EFATONTA
Suivant Article suivant : “tsy mpitondra manam-pahefana matanjaka no ilain’i Afrika fa Andrimpanjakana matanjaka”